Tổng hợp các ứng dụng xem phim trên Smart Tivi Samsung | Muasalebang - Muasalebang
Tổng hợp các ứng dụng xem phim trên Smart Tivi Samsung | Muasalebang
Đang Đọc: Tổng hợp các ứng dụng xem phim trên Smart Tivi Samsung | Muasalebang in Muasalebang
Namuhla, akuwona nje kuphela amakhompyutha aphathekayo amasha noma omakhalekhukhwini abakuvumela ukuthi ubukele amamuvi ku-inthanethi, kodwa nama-Smart TV anamuhla angakwenza lokho. Namuhla, I-TranDinh Electronics Sizokwethula ezinhlelweni ezikusiza ukuthi ubuke amamuvi ku-inthanethi khona kanye ocingweni lwakho I-Smart TV Samsung emndenini wami.
1 I. Izicelo zokubuka amamuvi kuma-Samsung Smart TV
1.1 5. Uhlelo lokusebenza lwe-HBO Manje
1.2 6. Vudu .App
1.3 7. Veoh
1.4 8. I-Tubi TV App
2 II. Isicelo sokubuka amamuvi kuma-Samsung Smart TVs asekhaya
3 III- Isiphetho
I. Izicelo zokubuka amamuvi kuma-Samsung Smart TV
+ Izithombe ezinhle kakhulu:
Njengohlelo lokusebenza lwamahhala lokubuka amavidiyo aku-inthanethi aziwa kakhulu emhlabeni, okwamanje I-YouTube eyakhelwe ngaphakathi emigqeni I-Smart TV etholakala emakethe.
I-YouTube inengobo yomlando yezigidigidi zamavidiyo ezinhlobo ezihlukahlukene, izihloko, ubude besikhathi, … ukuze abasebenzisi bathole kalula amavidiyo abawathandayo.
Isivinini sokulayisha ividiyo Ishesha kakhulu futhi ibushelelezi ngakho awusoze wesaba iziphazamiso
Uma usebenzisa lolu hlelo lokusebenza, ungafaka i-akhawunti egcwele noma ungayifaki ngokuthanda kwakho.
Okubaluleke nakakhulu, ungakwazi ukusakaza bukhoma khona emsamo I-YouTubeisici esiwusizo nesithakazelisayo.
Njengoba kuyanda ukuthunyelwa nokuqukethwe kuya ngokuya kuhlukahluka, I-YouTube Okuqukethwe kwevidiyo akukwazi ukucutshungulwa. Lokhu kulawula amavidiyo anokuqukethwe okungafanelekile ukuthi abe nomthelela ongemuhle emphakathini uma ebukwa.
Ukuvikelwa kwe-copyright akuqinisekisiwe uma amavidiyo ekopishwa kabanzi futhi ephinda ethunyelwa, okudida ulwazi uma useshwa.
Izithombe ezinhle kakhulu :
I-HDViet yiwebhusayithi ebuka imuvi eku-inthanethi enamafilimu amahle angaphezu kuka-10000 anezinhlobo ezahlukene ezifana nalezi: Amahlaya, isenzo, ingqondo, …
Ikhwalithi yefilimu enokulungiswa I-HD/I-HD Egcweleimibhalo engezansi yesiNgisi ibuyekezwa nsuku zonke.
I-HDViet inedumela elihle futhi yaziwa emphakathini othanda ama-movie
Intengo yephakheji nayo iyathengeka: 30,000 VND – 40,000 VND / Ngenyanga
I-HDViet ayizange idume ngempela: Ngesikhathi sika-2016 kwakukhona umugqa owodwa kuphela I-Smart TV Samsung etholakalayo HDViet in isitolo sohlelo lokusebenza.
Nokho, imigqa I-Sony Android TV Lokhu kungasetshenziswa futhi ngokufakwa kwe Amafayela e-APK.
Isivinini sokulanda ifilimu sivamise ukubukelwa phansi futhi kukhonondwe kakhulu.
Buka Okuningi : I-Samsung TV ayixhumi ku-wifi? Izixazululo
I-NetFlix iwuhlelo lokusebenza bukela amafilimu ku-inthanethi Amamuvi akhokhelwayo adume kakhulu emhlabeni namuhla, lokho kuduma kuvela esitolo esikhulu samamuvi esibuyekezwa nsuku zonke.
Ingenye yezinhlelo zokusebenza ezingavamile ezingadlala amamuvi wekhwalithi engu-4k noma ngisho I-HDR.
Okuqukethwe kwe-movie okucebile, abasebenzisi bangafinyelela ngokukhululekile izinhlobo abazithandayo ezifana amamuvi akudala, amadokhumentari, ama-sitcom,…
I-NetFlix Kukhona uhlelo lwezincomo zamamuvi olususelwe kumlando womsebenzisi wemikhuba yokubuka imuvi.
I-Netflix Okwamanje, intengo iphezulu kakhulu uma iqhathaniswa nenkundla evamile, ngakho-ke ababaningi abantu abeza ngempela
Lapho ufuna ukubhalisa ukusebenzisa isevisi ye I-Netflix lapho-ke kufanele ube ne-akhawunti yokukhokha yamazwe ngamazwe.
I-NetFlix njengamanje inemibhalo engezansi yesiNgisi ikakhulukazi nezinye izilimi ezimbalwa, kodwa kusembalwa kakhulu imibhalo engezansi yesi-Vietnamese.
Ukuba nesitolo semuvi nemidlalo ye-TV ehluke kakhulu, kodwa iningi lazo lisasekhona Amamuvi aseMelika, awekho amamuvi aseKorea, amamuvi eHong Kong, amaNdiya, amaJapani, amamuvi e-Thai.
Isivinini sokubuyekezwa kwemuvi yeNetflix sihamba kancane
Intengo ye-movie: 180,000 VND – 260,000 VND/ngenyanga.
Iflix ingathathwa njengekhophi ye I-NetFlix emazweni asathuthuka ngentengo efanelekile.
Ukufinyelela okungenamkhawulo esitolo sama-movie esigcwele eMelika futhi E-Asia okwami.
Nikeza ngochungechunge oluningi Korea futhi China akuvumele ujabulele isipiliyoni.
Vumela abasebenzisi baseVietnam ukuthi bakhokhe ngamashaneli amaningi njengamakhadi I-ATM, tamakhadi okuklwebha amafoni, ama-e-wallet, ….
I-akhawunti eyodwa ingangena futhi kumadivayisi angu-5 futhi ibuke kokubili Isikrini se-TV kanyekanye.
Ngoba yasungulwa ngo-2015 futhi isanda kuba khona Vietnam Akubanga isikhathi eside, ngakho-ke isitolo se-movie sika-Iflix asisisikhulu njengoba sinjalo I-NetFlix.
Intengo 45,000 – 59,000 VND/ngenyanga (khokha ngenyanga noma ngonyaka)
Landa isixhumanisi : play.google.com/store/apps/details?id=iflix.play
Mhlawumbe awazi: Iyini i-Dolby Atmos? Isebenza kanjani iDolby Atmos?
5. Uhlelo lokusebenza lwe-HBO Manje
Uhlelo lokusebenza luhlinzeka ngezinsizakalo ze-Video On Demand. Iningi lochungechunge lwe-TV oludumile, okungukuthi, i-Game Of Thrones ingatholwa ngokukhethekile kulezi zinhlelo zokusebenza. Njengenjwayelo, ukuze ukwazi ukufinyelela okuqukethwe udinga ukudala i-akhawunti yomuntu siqu.
Alukho olunye uhlelo lokusebenza olungahlula okuqukethwe kwe-HBO Now. Ngalolu hlelo lokusebenza ungafinyelela amamuvi amaningi asanda kukhishwa futhi ubukele nokukhonjiswa kwangaphambi kwesikhathi njengoba esakazwa kamuva nje.
6. Vudu .App
Lapho ufinyelela uhlelo lwe-Vudu, uzojabulela ikhwalithi yomsindo yakamuva ye-Dolby Atmos. Ngaphezu kwalokho, i-Vudu inikeza amamuvi anobude obugcwele anezikhangiso ezilinganiselwe.
Udinga nje ukudala i-Akhawunti ye-Vudu ukuze ukwazi ukujabulela izinsiza zayo. Ungasebenzisa le akhawunti ukuze uvule noma imaphi amakhophi edijithali Amavidiyo namamuvi futhi uthenge futhi uqashe amamuvi kuhlelo lokusebenza lwe-Vudu.
I-Veoh ingabhekwa njengenye indlela ephelele yohlelo lokusebenza Youtube, Veo inekhophi yesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esibukeka ngathi I-YouTube. Ungakhetha kalula, uzulazule futhi udlale okuqukethwe. Igcina okuqukethwe okuthunyelwa ngabasebenzisi namavidiyo avela emithonjeni echazwe ngaphambilini.
Veoh inesistimu yokuhlunga enamandla ukuze ukwazi ukukhetha izinketho zolimi lwakho, ubude bevidiyo nekhwalithi yevidiyo, njll. Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza, amavidiyo amaningi ngeke avele izikhangiso. . Ungabuka kalula amavidiyo e-HD ngokuguqula inketho.
Xem Thêm Giới thiệu về kích thước tivi các dòng phổ biến hiện nay | Muasalebang
8. I-Tubi TV App
Uhlelo lokusebenza lwe-Tubi TV ludume ngeqoqo lalo lama-Movie amasha. Ungasesha futhi ubuke ama-Movie amasha nemibukiso. Amamuvi nezinhlelo ngeke kutholakale isikhathi eside. Yingakho ungakwazi ukubeka phambili ulayini wakho wokusakaza-bukhoma.
Futhi ungabuka amafilimu anokuqukethwe kwabantu abadala, udinga ukudala i-akhawunti. Asikho isidingo sokukhokha indibilishi ngekhadi lakho lesikweletu.
II. Isicelo sokubuka amamuvi kuma-Samsung Smart TVs asekhaya
I-Zing TV wuhlelo lokubuka ividiyo olunesitolo sezinhlelo zokusebenza esicebe kakhulu nesikhethwe kahle okuhlanganisa nezinhlelo ezikhethekile ze-TV, ama-MV omculo, … avuselelwa njalo nsuku zonke.
Ama-Smart TV amaningi amanje anezinhlelo ezakhelwe ngaphakathi Zing Television lokhu.
Zing Television inamandla ochungechungeni, enekhwalithi ephezulu yevidiyo, imibhalo engezansi enhle, izibuyekezo ezisheshayo nokuhumusha okuhle.
Idizayini yokusebenzelana esebenziseka kalula, elungiselelwe ukuzizwisa.
Isivinini sokudlulisa esihle sezithombe zekhwalithi.
Isitolo samamuvi angajwayelekile salolu hlelo lokusebenza sinesizotha futhi ikakhulukazi Amafilimu aseKorea namaShayina.
Ezinye izici ku-TV zidinga ukuthi abasebenzisi bangene ku-akhawunti ukuze bakwazi ukusebenza
Ubunzima bokuthola nokukhetha i-MV kwezinye izinguqulo.
Asekhona amavidiyo ambalwa anekhwalithi ephansi.
Udinga nje ukucindezela inkinobho ethi Ikhaya Kude >> Khetha uhlelo lwe-Zing TV bese ulinda ukuthi kuphele isikhathi sokulanda.
Bona okuthunyelwe okwengeziwe: Isoftware yokubuka i-TV kumakhompyutha inokulandwa okuphezulu kakhulu ngo-2020
Lolu hlelo lokusebenza lokubuka i-TV kuma-Samsung Smart TVs luyisevisi yokubuka ividiyo efunwa kakhulu ye-Vietnam Film Studio Co., Ltd. futhi iqhutshwa yi-BHD enamafilimu angaphezu kuka-1000.
Nikeza ngamafilimu amaningi ase-Asia – ukunambitheka okulungile kwengxenye engencane yababukeli baseVietnam.
Ngaphezu kwenkonzo yokubhalisa engcwele, le Danet futhi inesevisi yokuqasha amamuvi ashisa kakhulu, asanda kukhululwa kumatiyetha, abasebenzisi bangajabulela amamuvi ashisayo angajwayelekile ezinyangeni ezimbalwa ngemuva kokuboniswa ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini.
Ezinye izinzuzo ezinikezwa yi-Danet ukuthi abasebenzisi abangakhokhi basengakwazi ukubuka amamuvi athile atholakala kukhathalogi yamahhala.
Ukuntuleka kwemidlalo eminingi ye-TV engokoqobo yaseMelika
Uhlu lwefilimu alucebile kakhulu.
Kwesinye isikhathi ikhasi lisenamaphutha, abasebenzisi bangachofoza imuvi kodwa bangabonisi okuqukethwe.
Intengo: 0 VND ngamamuvi wamahhala; 50,000 VND/ngenyanga ngephakheji le-Buffetcine; 12,000 – 29,000 VND/imuvi ngamamuvi ashisayo.
Landa isixhumanisi: play.google.com/store/apps/details?id=com.movideo.whitelabel
Uhlelo lokusebenza kuphela olungashicilela i-English Premier League lunelungelo lobunikazi eVietnam.
Ngeziteshi ezingaphezu kuka-30 zasekhaya ze-TV ongazibukela mahhala njengo I-VTV, i-CVTV, i-VTC,… Ngokuhambisana nalokho, kunamavidiyo noma iziqeshana zomculo, izinhlelo ze-TV, namahlaya ahlukahlukene futhi anekhwalithi enhle yesithombe.
Asikho isidingo se-akhawunti, akukho zindleko, futhi usengathola iziteshi eziningi ze-TV.
Isivinini sokudlulisa ulwazi esizinzile.
Izinhlelo zokusebenza ezidumile kuma-TV anesistimu yokusebenza ye-Android ye Ama-TV akwaSonyTizen of Samsung TVs kanye neWebOS ye I-LG TV,…
Xem Thêm Một số nguyên nhân dẫn tới màn hình tivi Samsung bị tối đen và cách khắc phục | Muasalebang
Ukusebenza kokungena okuyinkimbinkimbi kudinga i-akhawunti
I-interface inesiphithiphithi kancane
Alukho uhlelo lokusakaza lweziteshi okwamanje.
Indlela yokufaka lolu hlelo lokusebenza ngeyamamodeli anezinhlelo zokusebenza ezakhelwe ngaphakathi I-FPT Dlala esitolo sohlelo lokusebenza njenge I-TV ye-inthanethi futhi I-Smart TV Samsung bese udinga nje ukucindezela inkinobho ethi Ikhaya Isilawuli kude bese ukhetha isithonjana esiqanjwe I-FPT Dlala isivele iyasebenziseka.
Ngokuqondene namanye amamodeli, ungaya esigabeni Sezici Zohlelo Lokusebenza inkinobho ethi Ikhaya futhi ungavula ngokushesha izilungiselelo zohlelo.
I-Clip TV iyisevisi kamabonakude ye-inthanethi enezinkundla eziningi enokuqukethwe okucebile nokuhlukahlukene: amafilimu, ezemidlalo, amahlaya, uMbukiso we-TV,…kodwa zonke zinamalungelo obunikazi angu-100%.
Ngeziteshi ze-TV zasekhaya nezangaphandle ezingaphezu kwe-100 zokukulethela izikhathi eziphumuzayo nezimangalisayo zokuzijabulisa.
Kukhona izinhlelo ezifana : funda isiNgisi, funda ukudweba, ukuhlola,… ukuzinikela kubantwana abaswele, ukuzisiza ukuthi zicabange kangcono futhi zithuthukise ukufunda kwazo.
Ikhwalithi yesithombe ishelela ukuyibuka ngaphandle kokunensa.
Ihambisana nakho konke I-Smart TV manje unesistimu yokusebenza Android, Tizen kanye WebOS.
Kufanele ukhokhe imali yanyanga zonke ukuze ukwazi ukubuka zonke iziteshi nezitolo zamamuvi we Iziqeshana ze-TV.
Uma ungayikhokhi imali yokubuka, ungakubona kuphela Iziteshi zokusakaza ezingama-65.
Isiteshi asinakushintshwa kusetshenziswa iphedi yezinombolo.
Uya kuzilungiselelo. Thola bese ukhetha uhlelo lwe-Clip TV bese ulufaka. Bese uvula uhlelo lokusebenza bese ungena ngemvume ukuze ukwazi ukulisebenzisa ngokushesha.
Ifilimu+ uyilunga le I-Galaxy Media & Entertainmentingenye yezinkampani zokuzijabulisa ezihamba phambili eVietnam namuhla.
Mayelana nesitolo semuvi yeFilm+ noma isitolo sesevisi, kukhona namamuvi angaphezu kuka-1000.
Ukusebenzelana kwentsha nokunobungane kuletha wonke amaphakheji emuvi anyanga zonke, amamuvi aqashwayo namamuvi amahhala endaweni yokusebenzela efanayo ukuze abasebenzisi bakwazi ukukhetha kalula ngokuhleleka kwemuvi esikhundleni sokuhlukanisa ngokucacile into ngayinye.
Imibhalo engezansi yesi-Vietnamese iphelele kakhulu
Ingasetshenziswa emigqeni I-Samsung TV 2020.
Isivinini sokubuyekeza asiphezulu.
Kufanele uvule i-akhawunti Ifilimu + ukusebenzisa.
Landa isixhumanisi: play.google.com/store/apps/details?id=movies.fimplus.vn.andtv
Okungenhla isifinyezo sazo zonke izinhlelo zokusebenza zokubuka amamuvi kuma-Samsung Smart TV asuka phesheya kwezilwandle ukuze uthole ireferensi yakho futhi uwasebenzise lapho ikhaya lakho lisebenzisa amamodeli alandelayo: Ama-TV e-Samsung ashibhile.
Uma uneminye imibuzo, sicela usithinte ngokushesha Inombolo yocingo: 0984889418 ukuze uthole izeluleko nezimpendulo zemibuzo yakho. Futhi uma uzwa ukuthi lesi sihloko sisihle futhi siwusizo, sicela wabelane ngaso ngokushesha ku-Facebook noma ku-Intagram ukuze uthole abangani noma izihlobo ezizobhekisela kuzo.
iPhone Xs Max 64GB Cũ Quốc Tế Xách Tay, Mua Bán Trả Góp 0% | Muasalebang
Apple Car sẽ có công nghệ theo dõi mắt, bộ xử lý C1 | Muasalebang